Dhimasho iyo Dhaawac ka dhacday Walaweyn | Radio Baidoa
Guriga Wararka Maanta Dhimasho iyo Dhaawac ka dhacday Walaweyn
Dhimasho iyo Dhaawac ka dhacday Walaweyn
Faah faahino dheeraad ah ayaa waxaa ay kasoo baxayaan maleeshiyaad hubeysan oo la sheegay in qof ay ku dileen qof kalena ay ku dhaawaceen Gudaha degmada Walanweyn oo ka tirsan Gobolka Shabeellaha Hoose.
Dilka iyo dhaawaca loo geystay dadkaan ayaa yimid,kadib markii rag ku hubeysan qorayaha AK47 ay weerar kusoo qaadeen degmada Walanweyn,isla markaana ay dileen Macalin Dugsi Qur’aan oo lagu Magacaabi jiray Cusmaan Cirbad qof kale oo Shacab ahna ay dhaawaceen.
Qof kamid ah dadka kunool degmada Walanweyn,balse diiday in Magaciisa iyo codkiisa loo adeegsado Warbaahinta ayaa sheegay in arrintaan ay salka ku heyso aanooyin qabiil oo maalmahaan ka taagneyd degmadaasi Walanweyn,isla markaana dadkii ka dambeeyey falkaan ay baxsadeen.
Maamulka degmada Walanweyn ee Gobolka Shabeellaha Hoose weli kama hadlin dhacdadaan oo siweyn looga dareemay degmadaasi,waxaana dadka qaarkood ay sheegeen inay cabsi soo wajahday.
Weerarkaan dadka lagu dilay ee ka dhacay degmada Walanweyn ee Gobolka Shabeellaha Hoose ayaa sidoo kale waxaa uu kusoo aadayaa xilli Maalin ka hor maleeshiyaad hubeysan ay Magaalada ka dhaceyn Gaari,hayeeshee Ciidamada Amniga degmada oo ku baxay ay kasoo celiyeen.
Horay degmada Walanweyn ee Gobolka Shabeellaha Hoose waxaa uga dhacay dagaal dhex-marey Maleeshiyaad halbeel kasoo wada jeeda,dagaalkaas oo geystay khasaaro dhimasho iyo dhaawac ah.